နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးဟာ ဘယ်နှခုနှစ်မှာ အဆုံးသတ်ပြီး အောင်ပွဲရမှာလဲ ? အောင်ပွဲရဖို့ရော အလားအလာရှိပါသလား? – Buanchukcho
နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးဟာ ဘယ်နှခုနှစ်မှာ အဆုံးသတ်ပြီး အောင်ပွဲရမှာလဲ ? အောင်ပွဲရဖို့ရော အလားအလာရှိပါသလား?
တော်လှန်ရေး လက်ဆင့်ကမ်းမှု ချက်ခြင်းရပ်
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကရင်လူငယ်တွေရဲ့ တွေးခေါ်မှုပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားထက်သန်မှုပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာ လူကြီးတွေရဲ့ လျှောက်လမ်းမှုအပေါ် ဘ၀င်မကျဘဲ ဝေဖန်မှုများ စွာရှိနေသော်ငြားလည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ထိုးဖောက် ဖြန့်ကျက်စွာ မလုပ်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ကရင်လူငယ်များကိုယ်တိုင်မှာလည်း တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်ဝေ၀ါးနေလို့ ဝေဖန်၊ ရှုံ့ချမှုတွေနဲ့ပဲ အချိန် ကုန်နေတာပါ။
ဝေဖန်မှု သပ်သပ်နဲ့တော့ အောင်မြင်မှုရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ကရင့်တော် လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကို ချီတက်တဲ့နေရာမှာ လက်ရှိ၊ ရှိနေတဲ့ ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အပေါ် မှာပဲမှီတည်နေမယ် ဆိုရင် အောင်မြင်မှုနှင့်ဝေးပြီး နောက်မျိုးဆက် တွေကို တော်လှန်ရေးအမွေ ဆက်ပေးနေမှာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကရင်အမျိုးသားရေးပန်းတိုင်ကို သွားချင်ရင် ဒီအဖွဲ့တွေကို ကျော်ကြည့်နိုင်မှရမယ်။
“ကရင်တမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ရေး” ဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်ဟာ ဖိနှိပ်မှုက လွတ်မြောက်ဖို့၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးဖို့၊ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအနှစ်သာရကို ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ ရရ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ ကရင်တွေကြိုးစားလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီး ဘာမှအရာမထင်လာပါ။ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ နိုင်ငံထူထောင်ရေးကြားထဲ အချင်းပွားနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကရင်လူမျိုးတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရလာခဲ့တဲ့ ဂျင်းတစ်ခုကတော့ “Unity to Victory” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။ စင်စစ် ကရင်လူမျိုးစုပေါင်း (၁၀) ခုအထက်ရှိပြီး ဘာသာစကားအားဖြင့်လည်း မတူကြသလို နေရာဒေသတွေလည်း ပြန့်ကျဲနေကြပြီး တတိယနိုင်ငံထိတောင် ရောက်နေသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒီလို မတူကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ လူမျိုးအတွင်းမှာ “unity” ကို ရှာဖို့ဆိုတာ လက်တွေ့မကျတဲ့အရာပါ။ “Unity” ကို ရှာရင်း၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာရင်း နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ကြာသွားတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့ပြီ။
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကရင်တွေဟာ သီးခြားပုံစံ၊ ဗျူဟာတွေနဲ့ မိမိတို့ လိုချင်နေတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ တော်လှန်ရေးမျှော်မှန်းချက်အပေါ်မှာ ငြင်းခုံနေမှု ချက်ခြင်းရပ်သင့်ပါပြီး။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ လက်တွေ့ကျတဲ့ “Power” တည်ဆောက်ရေးကို အလေးပေးရမှာဖြစ်ပြီး အယူဝါဒတွေကို လိုက်ငြင်းနေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ မတူညီတဲ့ အယူဝါဒတွေကြား အငြင်းပွားနေကြမယ့်အစား မိမိကိုယ်တိုင် ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတာ မရှင်းလင်းကြဘူးဆိုရင် ဒီအပေါ် ယံတော်လှန်ရေးဟာ နောက်မျိုးဆက်ကို လက်ဆင့် ထပ်ကမ်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလက်ဆင့်ကမ်းမှု ဆက်မလုပ်ရေးက လက်ရှိနေရာ အရပ်ရပ်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကရင်လူငယ်တွေ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
Japan Nih Ralhraang Thimi Ambassador An Cohlaang Duh Hna Lo
ဟေတီမှာ အင်အားပြင်ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂,၂၀၀ ကျော်ရှိ